Vokatra Lojy eto Boeny: tsy azo hiodivirana intsony ny fametrahana tsena | Région Boeny
Nampivory ireo mpanangom-bokatra sy mpanondrana vokatra Lojy na Black eyes eto amin’ny faritra Boeny ny Lehiben’ny faritra ny zoma 28 aprily 2017 tao amin’ny biraony, ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina.
Mikasika ny fametrahana ny Tsenam-bokatra Lojy voahara-maso na Marchés Contrôlés manomboka amin’ity volana may ity no anton’ny fivoriana.
Tanjona roa no nanaovana ny fivoriana, dia ny:
1-ahafahan’ireo mpandraharaha ireo miomana dieny izao amin’ny fisian’izay tsenam-bokatra Lojy izay
2- hijerena ny marimaritra iraisana ho an’ireo mpisehatra rehetra voakasika amin’ny vokatra Lojy mba tsy hisin’ny sakana sy faty antoka be loatra.
Araka ny voalazan’ny Talem-paritry ny varotra sy ny fanjifana, izay nivory tao ihany koa, dia tsy azo hiodivirana intsony ny fisian’io tsena io fa tsy maintsy apetraka.
Nampahatsihivin’ny mambran’ny mpanatantaeraky ny Vovonam-paritra Lojy nandritra io fivoriana io ihany koa ny fisian’ny lalànam-paritra mifehy ny seha-piharina Lojy izay efa nivoaka ny taona 2015, ary ny Vovonam-paritra Lojy izay efa voatsangana tamin’ny taona 2016. Satria samy somary natoritory ny fampiharana iry voalohany, sy ny fiasan’iry faharoa.
Ankoatra izay dia nanambara ny Lehiben’ny faritra fa tsy maintsy hisy ny fihaonana miaraka amin’ireo mpikirakira eny amin’ny Seranan-tsambon’I Mahajanga, handaminana ny fanondranana entana mba iàlana amin’ny olana tamin’ny fanondranana Lojy tamin’ny taon-dasa.